May 2021 - Puntland Mirror Believable Media Website
May 27, 2021 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan xalinta ismari-waagii ka taagnaa doorashada. Kadib dhowr maalmood oo wadahadalo Muqdisho uga socday Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha Dowladda Xubnaha […]
May 22, 2021 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kulan ku saabsan doorashada oo u dhaxeeya Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay caasimada Muqdisho. Kulankan oo sii socon doona ayaa […]
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Cabdisamad Cali Shire oo geeriyooday
May 20, 2021 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntaland Mirror) Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Cabdisamad Cali Shire ayaa ku geeriyooday Muqdisho subaxnimadii hore ee Khamiista, sida bog-wareedka Puntland Mirror ay u xaqiijiyeen masuuliyiin katirsan dowladda. Cabdisamad ayaa bilihii u dambeeyay la […]
May 20, 2021 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiiradda oo muddo la sugayay. Hooska ka akhriso liiska wasiiradda, wasiir ku xigeenada iyo wasiir dowlayaasha.
May 12, 2021 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirrror) Maxkamada ciidamada Puntland ee gobolka Mudug ayaa maanta oo Khamiis ah dil toogasho ah ku xukuntay shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha maxkamada. Xubnaha la xukumay ayaa lagu helay in […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka da’ayay gudaha Puntland ayaa hal qof ku dilay gobolka Nugaal, sida dadka deegaanka ay u sheegeen bog-wareedka Puntland Mirror. Roobabka […]
May 10, 2021 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qof ismiidaamiye ah ayaa sideed qof ku dilay qarax ka dhacay saldhiga booliis oo kuyaala Muqdisho fiidnimadii Isniinta, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka. Qofka ismiidaamiyaha ahaa oo xirnaa jaakada qarax ayaa […]
May 6, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta xafiiska ku qaabilay Guy Griffin oo ah madaxa xafiiska Qaramada Midoobay ee Puntland. Kulanka madaxweynaha iyo madaxa Qaramada Midoobay ayaa diirada lagu saaray arrimaha Puntland iyo […]
May 1, 2021 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay maanta oo Sabti ah in ay ka laabtaan tilaabadii muddo kordhinta labbada sanno ahayd ee khilaafku ka dhashay oo ay ansixiyeen bishii lasoo […]
Nine Al-Shabab fighters killed in US airstrike near Kismaayo
Mogadishu-(Puntland Mirror) Nine fighters from Al-Shabab were killed in US airstrike, US Africa command said in a statement on Tuesday. The attack occurred about 40 km northeast of the city of Kismayo in Lower Juba [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay ayaa goor dhoweyd waxaa lala eegtay albaabka hore Huteel Naasahablood ee magaalada Muqdisho. Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho, caaismada Soomaaliya. Warbaahinta [...]
Wariyeyaasha Puntland oo banaan-bax dhigay si ay u dalbadaan sii daynta wariye xiran
Garoowe-(Puntland Mirror) Wariyeyaasha jooga Garoowe ayaa maanta oo Khamiis ah isugu tagay irida hore ee aqalka baarlamaanka Puntland si ay uga banaan-baxaan xariga wariye Cumar Maxamed oo loo yaqaan (Cumar Dheere) kaasoo weli ku xiran xabsi [...]